Ukufota, ukunyaniseka kunye noRobert & Shana Parkeharrison | Izidalwa ezikwi-Intanethi
'Ingqondo yasentwasahlobo' nguRobert & Shana Parkeharrison
Izolo sidibene Ukufota kwi-surreal nguMichal Bieganski nolo khangelo kuye kwiindawo ezingaqhelekanga kunye namahlathi apho izibuko zidida khona xa umbukeli ejonga enye yemisebenzi yakhe.
Namhlanje sibuya ngolwe-Sihlanu kulo surrealism ekufotweni ngesandla sikaRobert & Shana Parkeharrison. Njengoko bona ngokwabo bebeka izimvo kwiwebhusayithi yabo, bayila imisebenzi Ukuphendula ubudlelwane babantu, itekhnoloji kunye nendalo. Oku sinokukubona kwimisebenzi yakhe apho ingxelo ebambekayo inika umbono wakhe kwingxaki yokudibanisa phakathi kweminqweno yabantu kunye nezo ziya kwinto entsha kunye netekhnoloji.
"Ingqondo yasentwasahlobo" yi Imifanekiso yokufota kwaye ithimba ingqalelo yombukeli. Ngeli xesha lonyaka xa siza kunyathela kwezi ntyatyambo kwaye sifumanise ukuba ukutshintsha kwethoni elundini nasemhlabeni, uRobert noShana basizisela amanyathelo okuqala entwasahlobo ngokwembono yabo.
Ngesixhobo sakhe esisebenza ngomatshini kunye nezo mbewu azikhuphileyo, zijikelezwe ngamabhabhathane, ophambili kule foto ukulima umhlaba onyatheleyo ngamandla aneleyo esiwafumanayo ukusuka kwiposi esetyenzisiweyo ekubambeni. Ifoto ehambelana kakhulu nabanye abaninzi onokuyifumana kwesi sibini sinomdla omkhulu wokuzonwabisa.
Iqondo lokuphindaphinda kwimeko engaqhelekanga kunye nezinto zendalo zixhomekeke kwimbono yabaphulaphuli. Ewe nayo iyabonakala umgangatho wokufota njengawo wonke umsebenzi wakhe wegraphic onokuwufumana kwiwebhusayithi yakhe, ikhonkco apha.
Ingqokelela nayo efuna Isihobe njengesiqhelo esiqhelekileyo kwaye loo mibala ye-pastel ineethoni ezithambileyo. Isibini esihamba kunye ukufumana olona qikelelo lobugcisa kunye nokuziqhelanisa nokuhlala kwabo bobabini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » 'Ingqondo yasentwasahlobo' nguRobert & Shana Parkeharrison
Umzekeliso wedijithali kaKylin Li